Baroordiiq loo sameeyey macalinkii lugu hor dilay iskuul ku yiilay Göteborg | Somaliska
Baroordiiq loo sameeyey macalinkii lugu hor dilay iskuul ku yiilay Göteborg
Barooqdiiq ayaa maanta loogu sameeyey magaaladda Göteborg iyo agagarkii dugsigii lugu hor dilay macalin ka shaqeeynayey dugsga hoose dhexe ee Lövgärdetsskolan oo jimcihii niman hubeeysan tacshiirad ku fureen.
Baroordiiqdan ayaa aheyd mid lugu muujinayey sida looga xun yahay falka lugu dilay macalinkaasi. Waxaa goobtii lugu dilay ku sugnaa dadweyne faro badan iyo eheladda macalinka dhalay oo halkaasi taagnaa kuna muujinayey dareenkooda xanuunka leh.
Dhacdadii lugu dilay macalinkan maalintii jimcihii ayaa argagax ku riday ardeyda dhigata iskuulka iyo dadka deegaanka. Ma jirto cid loo soo qabtay dilka macalinkaasi sida ku meel gaarka ah uga shaqeeynayey iskuulka, balse boolisku waxaa ay sheegeen ineey ku raad joogaan ciddii falkaasi geeysatay.
Maxkamada Socdaalka oo markale dib u dhigtay kiis ku saabsan arimaha Soomaalida